अनुहारमा चाउरी पर्न थाल्यो ? यी उपाय फलो गर्नुहोस् « Dainik Online
अनुहारमा चाउरी पर्न थाल्यो ? यी उपाय फलो गर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७७, बुधबार २ : ४३
उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर कतिपय उमेर पुगीसकेकाहरुको पनि अनुहार कलिलै र चाउरी रहित हुन्छ । उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्छ।
यसका लागि फलफुलमा विशेष जोड दिनुपर्छ । सर्बसुलभ रुपमा पाइने पाँच प्रकारका फलफुलले तपाईको छालामा चमक ल्याउछन्।